Ny Semalt dia manome loharanon-kevitra mahaliana amin'ny Top 5 Web Scrapers
Matetika ny fampahalalana ilaintsika dia voafandrika ao anaty tranokala, ary isika dia tsy afaka hikapoka na hitsikerana azy tsara. Na dia miezaka aza ny tranonkala sasany hampiseho ny angona amin'ny endrika madio sy strukture, ny hafa dia tsy afaka manome aterineto mikirakira na tranokala. Izany no antony ilaintsika ny miditra amin'ireo mpilalao madinika indrindra, mpitrandraka sy mpanodina tsara indrindra. Eto izahay dia niresaka momba ireo fitaovana dimy avo lenta.
Ny Webhose.io dia ahafahantsika mahazo ny angon-drakitry ny aterineto amin'ny loharano sy tranonkala an-tserasera. Ny ampahany tsara indrindra dia ity programa ity dia manangona sy manaparitaka ireo toerana mora ary manolotra rakitra amin'ny endrika madio sy voalamina. Manampy antsika koa ny mamaky ireo angona mifototra amin'ireo teny sy fehezanteny, fiteny ary natiora. Ny valiny farany dia azo amin'ny endriky ny rakitra XML, RSS ary JSON. Na dia maimaim-poana aza ity programa ity, dia azonao atao ny miditra amin'ny laharana voalohany raha te hampiasa tranonkala Webhose.io. Ny drafitra karama dia ahafahanao mandefa ny fangatahanao HTTP amin'ny lohamilina mainty, mba hahafahanao mamaky sy manaparitaka ireo tranonkala.
Scrapy dia rindrambaiko mahery vaika sy mahavariana ao amin'ny aterineto. Ny ampahany tsara indrindra amin'izany dia ny fanohanan'ny manam-pahaizana manokana ity programa ity, izay ahafahanao mifandray amin'ny torohevitra mahasoa sy
Raha tsy mahazo aina ianao amin'ny code, Outwit Habe dia manome anao ny interface mety tsara, ka mahatonga anao ho mora kokoa aminao ny hitsikera sy hanangona ny angon-drakitra.Ny tranonkala ofisialy no azo alaina ao amin'ny tranonkala ofisialy, ary ny dikan-teny maimaim-poana dia azo alefa any amin'ny fivarotana amin'ny aterineto.
5. Fitaovana Web ho an'ny Chrome:
Raha manana Google Chrome ianao ho toy ny tranonkalan'ny tranonkala voalohany, dia tokony hifidy Web Scraper ianao. Izy io dia programa mikararana sy fitrandrahana manokana izay ahafahanao mamorona sitemap ho an'ny bilaoginao manokana sy tranokala fandraharahàna. Tsy maintsy maka download ianao, mametraka ary manaparitaka ity rindrambaiko ity ao amin'ny navigateur Chrome ianao ary hijery ny fomba hamokarany angona avy amin'ny tranonkala nomena anao. Azonao atao koa ny mametraka ny sitemap na mampiasa ny sasantsasany mba hanatsarana ny fijery sy ny fahitana ny tranonkala. Izany dia hamonjy ny angon-drakitra voatahiry ao amin'ny rakitra CSV na ao amin'ny ordinaterany manokana Source .